Vachenjeri vekare vakati chitsva chiri murutsoka garo harina chitsva. Ko ukasafamba ungaonei kana kuzivei zvitsva. Mugore ra2016 ndakafamba ndichitsvaka kuziva zvitsva uye kutandadzwa nezvandaiona. Mukufamba kwangu handina kushaya zvakatora moyo wangu zvikandisimudzira uye zvikandipa zvidzidzo. Ndakavakurudzwa pamaonero angu uye mafungiro pamwe nemaitiro. Chidzidzo chandakasangana nacho chikuru ndechokuti hudavadi hahuwanikwi muHarare chete. Hongu Harare ndiyo muzinda mukuru wenyika yeZimbabwe, uye munhu wese anomanyirako asi iye zvino yazarisa zvekuti hapachina chitsva chinoshamisa kuona kana kufadza chichiri muHarare. Kunze kweHarare kunonaka kudarika Harare. Muzipiro wekunze kweHarare unokusiya usisadi kugara muHarare uye wachenjera zvekuti panotaurwa nyaya dzehudavadi hauomereri nekubatirira pavadavadi vemuHarare saivo vega vanogona kutandadza vanhu. Ndichatanga nekutaura nezvandakaona uye zvakanditora moyo kunze kweHarare.
Iri guwerere rehudavadi kw…
Kumashure uko ndakambonyora nezvepamusoro pemba yekubikira. Chinyorwa chino chinovavarira kujekesa sanduko iri kuramba ichiitika kuimba yekubikira iyo inova yaive ndiyo tembere yavanhu vatema. Imba kareko yairindwa nemadzimai vanova ndivo vaigara, kurairana, kuvakana, nekuchengetedza utano hwemhuri kubva muimba iyi. Zvino nekupinduka kwemamirire nemagarire evanhu, imba iyi yasanduka. Imba yekubikira pachivanhu ndeyedenderedzwa yakapfurirwa nehuswa. Nhasi ndauya nemba yapindinduka chimiriro. Kare kumashure uko imba iyi yaivakwa namapango emiti yakasiyana-siyana yakasimba iyo isingapfukutwi nezvipfukuto. Denga rayo raipfirirwa nehuswa uye chidziro chayo chainamiwa neivhu pasi pachiroverwa nendovaro uye pachizodzurwa nendove yemombe. Zvaiti zviya chidziro chayo chanamwa neivhu repachuru kudaro, kuti mitswe iya inozivikanwa ichiitika pavhu rechuru isaoneka kana kuti ivharike pamusoro pevhu rechuru rakanama imba raizodzurwa nemushapa. Mushapa ivhu rakati reru…
Aita twake ndihombarume, ndiko kureva kwevachenjeri vekare. Vakapamhidzazve voti chave chigondora chave chimombe, kurega kutunga hwava hurema hwacho. Asi Havana kugumira zvavo ipapo nekuti vakawedzera voti mhembwe rudzi inozvara mwana ane ruzhumwi.
Nyaya yandakanangana nayo pano ndeyemunyori anonzi Farai Mungoshi anova mwana wemutambi nemugadziri wemafirimu, Jesesi Mungoshi nemunyori ane mukurumbira Charles Mungoshi. Zvino mukukurukura kwaakaiita rimwe zuva adaidzwa kuti akute chikuva cheUniversity of Zimbabwe Press and Writers Club akati iye akatanga kumhanya nekunyora mafirimu achida kuti asaenzaniswa pakupenengurwa nevapenenguri vezvinyorwa nababa vake. Chaasina kuyeuka hake ndechekuti kumafirimu kwekare aigona kuenzaniswa naamai vake zvekare vakava nemukurumbira pavakava mutambi Neria mufirimu rainzi Neria.
Zvinhu kana zviri muropa zvinokutakura kuenda newe kwaunenge uchiedza kutiza. Rwendo rwuno mukomana akabva aona zvakakodzera kudzokera ndima yaaimbenge achinzvenga. Shasha yakab…
Michero yemusango muchaiyeuka here, kwenyu munoipa mazita api?
Barweregudo. Bango Village Murewa. Mufananidzo naTinashe Muchuri 31 Zvita 2016.
Mubhubhunu uri kufurura maruva, Gwanha Village KuZaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri, 3Ndira 2017.
Ndichadzoka nemazita ekwedu kana mandipawo ekwenyu kumusha. Ndiwo mafambire atiri kuda kuita zvino. Mumwaka uno apo tinofamba tichitaura nyaya yetsika namagariro evanhu venyika ino. Mifananidzo iyi imwe yacho ndakaitora kuZaka kunzvimbo yekwaGwanha kwaSadunhu Mawadze pamwe nekwaMurewa kwaBango.